Su'aalaha La Weydiiyo - Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd.
Mashiinka Lathe CNC yar
Mashiinka Lathe Dhexe ee CNC
Mashiinka CNC Lathe culus
Mashiinka Mashiinka Lathe CNC Slant
Nooca Swiss Mashiinka Lathe CNC
Daawaha Alloy Wheel CNC Lathe Machine
Mashiinka Milling CNC
Xarunta Mashiinka Tooska ah
Lathe Iyo Milling Combo
Lathe Sariirta Flat iyo Milling Combo
Lathe Sariirta Slant Iyo Miisaanka Combo
Band Saw Mashiinka
Mashiinka Lathe Buugga
1. Sidee loo helaa qiimaha mashiinka lathe CNC, mashiinka wax lagu shiido cnc, xarunta mashiinka toosan ee cnc, lathe gacanta si dhakhso leh?
Badanaa waxaan kugula talin doonnaa qaabka saxda ah (mashiinka lathe cnc, mashiinka wax lagu shiido, mashiinka lathe, cnc xarunta mashiinka toosan, nooca swiss mashiinka lathe, mashiinka lathe sariirta sintiga ah) sida ku cad sawirkaaga ama sawiradaada, waxaan ku siin doonaa xalka ugu fiican, qiimaha ugu hooseeya iyo tayada ugu fiican.
2. Ma dhib baa in la rakibo mashiinka lathe cnc, mashiinka wax lagu shiido cnc, nooca swiss mashiinka lathe cnc? Sidee loo rakibaa mashiinka?
Ku rakib mashiinka (mashiinka lathe cnc, mashiinka wax lagu shiido cnc, mashiinka lathe ee gacanta, xarunta mashiinka toosan ee cnc, mashiinka lathe cnc nooca swiss, mashiinka lathe cnc slit) waa fududahay. Mashiinka si fiican ayaa loo soo ururin karaa markii aad hesho mashiinka, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad sifeeysid heerka oo aad saliid ku darto. Hadaadan wali garanayn sida loo rakibo fiidiyow ayaan kuu samaynaynaa.
3. Waa maxay muddada dammaanadda ee mashiinku?
Hal sano mashiinka oo dhan (mashiinka lathe cnc, mashiinka wax lagu shiido cnc, lathe gacmeed, xarunta mashiinka toosan ee cnc, mashiinka lathe cnc nooca swiss, mashiinka lathe sita sintka), inta lagu jiro mudada hadii ay jiraan waxyeello soo gaartay waxaan siin doonaa qalabka cusub qaybo bilaash ah
4. Ma loo oggol yahay adeegga dibedda?
Hubaal. Haddii mishiinka (mashiinka lathe cnc, mashiinka wax lagu shiido cnc, mashiinka lathe ee gacanta, xarunta mashiinka toosan ee cnc, mashiinka lathe cnc nooca swiss, mashiinka lathe sariirta slat) waxay u baahan yihiin adeeg xad dhaaf ah. Injineerkeennu wuxuu ku bixin karaa adeegga dibedda xaalad caadi ah (Force Majeure Excluded). Macluumaadka faahfaahsan ee aad nagula soo xiriiri karto bilaash.
5. Waa maxay muddada bixinta?
Lacag bixinta mashiinkeena (mashiinka lathe cnc, mashiinka wax lagu shiido cnc, lathe gacmeed, xarunta mashiinka toosan ee cnc, nooca swiss mashiinka lathe, mashiinka sariirta jiifka ah) waa 30% T / T lacag dhigis ahaan, baaqiga waa inla bixiyaa kahor rarka . Waxaan aqbalnaa L / C, T / T, Western Union, D / P, D / A iyo MoneyGram iwm
6. Mashiinka miyaa la qaabeyn karaa?
Sure, waxaan ku soo saari karnaa mashiinka la habeeyay shuruudahaaga faahfaahsan. Ku dar rakibida qalabka nool, turret-ka nool, VDI turret ee mashiinka lathe-ga ee cnc. Ku rakib dhidibka 4aad, dhidibka 5aad, habka hagida toosan ee mashiinkeena wax lagu shiido cnc.
Qaabeynta kartoo, muuqaalka ayaa la heli karaa